Crank Up Your Content Marketing site Na-achọpụta 6 Ndị a Gaps | Martech Zone
Crank Up Your Content Marketing site Identchọpụta ndị a 6 Gaps
Enwere m obi ụtọ ịme webinar ụnyaahụ dịka akụkụ nke Ngwa ngwa E-Ọzụzụ Ndị Nlekọta Ọdịmma Ahịa Summit. Ka nwere ike ịdebanye aha n'efu, lee ihe ndekọ ahụ, wee budata akwụkwọ ọgụgụ na ihe ngosi. Isi okwu m dị na atụmatụ anyị na-arụ na ndị ahịa anyị na nke ikpeazụ afọ ole na ole - ịmata oghere dị na atụmatụ ọdịnaya ha nke na enyere ha aka iwulite ikike ma chighari mgbanwe.
Ọ bụ ezie na ogo ọdịnaya dị oke mkpa maka ọganiihu nke ndị ahịa anyị, ọ bụghịzị ajụjụ ego ole ọdịnaya ide. Ndị ahịa anyị niile na-amata na ha bụ ndị mbipụta akwụkwọ ugbu a. Ajụjụ ọhụrụ bụ gịnị ka ha kwesịrị ide. Ọrụ anyị na-achọta ọdịiche dị na usoro ọdịnaya nke ndị ahịa anyị na ịmepụta azịza nke kachasị mejupụta oghere ndị ahụ.
Maka ndị ahịa anyị kachasị ukwuu, ndị nwere ọnụ ụlọ akụkọ, ọ bụghị ọrụ dị mfe. Anyị na-ebubata ihe karịrị nde 2 ndebanye kwa izu n'ime igwe-arụ ọrụ Big Data nke anyị wuru ebe anyị nwere ike iberi ma chọọ ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya nchịkọta data ngwa ngwa o kwere mee iji chọpụta ohere. Maka blọgụ nke anyị, ọ dịtụ mfe. Anyị na-enyocha ngwa anyị ma na-eme nyocha kwa ọnwa iji chọta ohere. Nke a bụ mmebi ahụ:
Chọta oghere dị na atụmatụ afọ ojuju gị
Ajuju Ajuju na Azịza - lelee folda gị zigara (ọkachasị mmepe azụmaahịa / ndị ahịa gị). Na-enyocha folda nke m zigara, a na m ahụkarị ajụjụ ndị ahịa na ajụjụ na atụmanya. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị na atụmanya gị na-ajụ, enwere ike bụrụ na ndị mmadụ na-enyocha ma na-achọ ozi ahụ na ntanetị.
mpi - Gịnị bụ ndị ahịa gị ogo na ị ga-achọ? Enwere nnukwu ngwaọrụ na ahịa ebe ị pụrụ nanị pịnye na ha na ngalaba na-abịa na ndepụta nke Keywords ha ọkwá na - na peeji nke na-ogo. Ọbụna nke ka mma, ịnwere ike pịnye ngalaba gị wee lelee ngalaba ndị ọzọ nwere isiokwu dị iche iche. Nke a bụ akụ dị oke ọnụ nke data ọdịiche!
Trends - Kedu usoro ọchụchọ na-eme na ndị Keywords karịrị oge? Nke a na - enyere gị aka ịhazi kalenda dị irè kwa afọ - ịchọta oge kachasị mma iji hazie ọdịnaya gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwere ya ọkwa, jiri kalịnda ederede - Kapost, Usoro na Dezie Oru maka WordPress, Ngwakọta na Oracle Marketing Cloud dị ole na ole.
Usoro metụtara - Ọ bụghị naanị banyere ihe ị ree, ọ bụ ihe na-ege ntị na ihe ọmụma ha na-achọ. Pịnye na isiokwu na Google ma chọpụta n'okpuru ọchụchọ gị maka okwu ndị metụtara ya. Jiri ngwá ọrụ dị ka WordTracker ị nwedịrị ike ịza ajụjụ ọchụchọ ọchụchọ ndị mmadụ na-eji.
Isiokwu Ọnọdụ - Ranknye ọkwa mpaghara anaghị egbochi gị ịnye ọkwa mba ma ọ bụ mba! Ekwu okwu banyere ulo oru na ebe ichota regionally na mgbe ị ga-ahụ na ị nọkwasara sara mbara na-abụghị ọnọdụ okwu. Mmeri mpaghara ma ị ga-aga n'ihu ịgbasa mmetụta gị gafere obodo gị ma ọ bụ steeti ị na-ejere ozi.
Nye Uru - Ọtụtụ usoro atụmatụ dị iche iche na-elekwasị anya na akara, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Gị ọdịnaya kwesịrị lekwasịrị anya na-ege gị ntị. Inyere ndị na-ege gị ntị aka ịga nke ọma ga-eme ka ntụkwasị obi na ikike na-ewuli ọkụ - na-eduga na ntụgharị. Curate ọdịnaya dị ukwuu sitere na isi mmalite ndị tụkwasịrị obi iji kwalite njikọ ahụ. Y’oburu n’inwa iru ndi okacha n’iru ahia, nye ha ihe ozo di nma na enyere ha aka idi nke oma. Ọ bụrụ n’ịgbalị inyere ndị nwe ụlọ aka, ịkekọrịta edemede ga - enyere gị aka site na mkpuchi na ịgbanwe nzacha dị mma. Ọdịnaya ekwesịghị ịbụ maka mgbe ị na-ere.
Ugbu a ị nwere nnukwu isiokwu ị ga-ede banyere ya, oge eruola ị gbanwee asọmpi ahụ. I tosiri ebuli usoro nke ọdịnaya gị ma dee karie asọmpi ahụ. Ọtụtụ mgbe nke a pụtara ịbanye na nkọwa miri emi karị, na-eji visuals arụ ọrụ nke ọma, ma na-agụnye data nkwado ma ọ bụ ntụaka. Anyị na-eme nke a site na ịmepụta infographics na whitepapers maka ndị ahịa anyị, wee dee ederede zuru ezu nke meriri ọchụchọ ahụ!
analysis - Nyochaa usoro nke ihu na-emeri mmeri, usoro nchịkwa saịtị, ndị na-ajụ ase, aha, isi okwu, na isiokwu nta ka ị nwee ike mepee peeji ka mma. Ihe omuma na vidiyo di egwu maka nke a.
Dị mma - Gbaa mbọ hụ na ibe gị dị mfe ịkekọrịta, na-eji microformats na bọtịnụ nkekọrịta mmekọrịta iji bulie iru ya.
Eme - advertisingzụta mgbasa ozi ezubere iche iji hụ na ị na-agbazi ndị asọmpi gị.
Tags: -aza,ndị na-ege ntịuru ụlọnyocha ọdịnaya na-asọmpicontent Marketingatụmatụ ọdịnayaọnọdụ ọdịnayaọnọdụ googlemata oghereọdịnaya dabere na ọnọdụngosipụta ahịangosiajụjụslidesharebara uru ọdịnayauru
4 Ezigbo Ndụmọdụ Maka Optchọta Ihe Onyonyo Onyonyo Gị